ọdụ ụgbọ elu Paris | Njem akụkọ
Mariela Carril | 29/03/2022 17:00 | Ụlọ elu, Paris
Paris Ọ bụ otu n'ime nnukwu isi obodo nke ụwa ma dị ka nke a nwere ọtụtụ ụzọ ịnweta. Ihe niile dabere na ebe ị si bịa, mana ọ bụrụ na ị rutere n'ikuku, isi obodo France nwere ọdụ ụgbọ elu atọ.
Taa na Actualidad Viajes anyị ga-ama ihe enwere ịmara gbasara nke ọ bụla ọdụ ụgbọ elu Paris.
1 Ọdụ ụgbọ elu Charles de Gaulle
2 Ọdụ ụgbọ elu Paris Orly
3 Ọdụ ụgbọ elu Beauvais
Ọdụ ụgbọ elu Charles de Gaulle
Ọ bụ nke a kacha mara amara nke ọdụ ụgbọ elu atọ ahụ ma jiri ọtụtụ aha mara ya ka ị nwee mgbagwoju anya. Koodu bụ CDG na owu na-ama ya 23 kilomita site n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke obodo ahụ. Ọdụ ụgbọ elu a nwere ọnụ ụzọ atọ nke na-eji ụgbọ elu mba ụwa na ebe ndị ọzọ na-aga na Europe na ụgbọ elu chata.
"Ọdụ ụgbọ elu Paris", "Charles de Gaulle Airport", "Paris Charles de Gaulle", "Roisy Charles de Gaulle ma ọ bụ Roissy Airport bụ aha ndị e ji mara ya. Ọnụ ụzọ niile nwere paspọtụ na njikwa kọstọm. Dabere na oge na ụbọchị, ọ nwere ike were naanị nkeji iri ma ọ bụ otu awa ịpụ ma nwee ike ichere akpa gị ma ọ bụ akpa azụ n'akụkụ carousel gọziri nke na-eme ka anyị niile nwee ntakịrị ụjọ. Akpa m ga-adị ebe ahụ…?
Ozugbo ị nwetachara akpa gị, ị ga-agarịrị na kọstọm ma ị nọworị na mpaghara ndị nkịtị nke ọdụ ụgbọ elu. Ọ bụ nnukwu saịtị ma ị nwere ike ịtụ egwu ịfufu, mana Enwere akara na French na Bekee n'ebe niile.
Ị nwere ike iji ụgbọ oloko, tagzi, ụgbọ ala nkeonwe, ụgbọ ala ọha, si ọdụ ụgbọ elu rute Paris… The dị ọnụ ala na kasị ụzọ bụ jiri RER, ọ bụ ezie na mgbe e mesịrị, ị ga-aga n'ọdụ ụgbọ oloko n'onwe gị, ma ọ bụrụ na ị na-eme njem ọkụ n'enweghị obi abụọ, nke a bụ ihe kacha akwadoro.
na Ụgbọ ala ROISSY Ha bụkwa ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ gị dị na mpaghara Opera. ọ bụrụ na ị bịarute n'abalị enwere naanị otu ụgbọ ala abalị, Noctilien, nke jikọtara ọdụ ụgbọ elu na ebe dị iche iche na Paris n'etiti elekere 12:30 na 5:30 nke ụtụtụ. Ọ na-eburu ndị njem site na ọnụ ụzọ Terminal 26 1, ọnụ ụzọ 2F Terminal 2 na ọdụ Roissypoe kwa elekere.
Ọdụ ụgbọ elu Paris Orly
ọdụ ụgbọ elu a ọ dị nso n’obodo ahụ, naanị kilomita iri na anọ n’ebe ndịda site na mpaghara etiti nke isi obodo French. Ugbu a O nwere ọdụ ọdụ anọ nke obere ụgbọ oloko jikọtara. Tupu e wuo ọdụ ụgbọ elu Charles de Gaulle, nke a bụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, mana taa ihe agbanweela.
Taa ọtụtụ ụgbọ elu mba ụwa ebugharịla na ọdụ ụgbọ elu Chares de Gaulle na nke a, Orly, n'agbanyeghị na ọ ka bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu kachasị na France, naanị nwere, na-abụkarị ụgbọ elu ụlọ.
Koodu gị bụ ORY na n'agbanyeghị na ọ na-etinye uche n'ụgbọ okporo ígwè ụlọ, ọ na-enwetakwa ụgbọ elu site na ụfọdụ obodo na United Kingdom na ndị ọzọ na Europe na ọbụna Africa, Middle East, North America, Southeast Asia na Caribbean.
Ọ nwere ọnụ ụzọ anọ jikọtara, dịka anyị kwuru, site na ọrụ ụgbọ oloko kamakwa e nwere tagzi na bọs ndị a na-akara ebe nkwụsị ha nke ọma ma n'ime ọdụ ụgbọ elu ma n'èzí ha. Sekit ndị njem na-eso bụ nke ọdụ ụgbọ elu niile: ụgbọ elu na-abịarute, ị ga-apụ, chọọ akpa gị, ikekwe chere ọkara otu awa ma ọ bụ karịa, ị na-eburu akpa gị gaa na omenala.
N'ozuzu, ha bụ naanị nlele ngwa ngwa, ya mere n'ime nkeji ole na ole ọzọ, ndị njem abanyelarị n'ebe ndị a na-ahụkarị, na-ahụ ka ha ga-esi ruo ebe ikpeazụ ha na-aga. Kedu nhọrọ iji si ọdụ ụgbọ elu gaa Paris ka anyị nwere? Enwere ụgbọ ala na-aga ebe dị iche iche, C Paris, OrlyBus, OrlyVal, ụgbọ elu anwansị Orly gaa Disneyland Paris.
Ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe karịa ma ịchọghị imefu ya bọs 183 Ọ na-aga Porte de Choisy ma site n'ebe ahụ ị nwere ike iburu metro gaa n'etiti. Enwekwara tram 7 nke rutere na ndịda ọwụwa anyanwụ Paris, na ọdụ Villejuif-Louis Aragon na ahịrị 7.
Le ụgbọ ala Direct tỌ nwere ụgbọ ala dị mma nke ukwuu na ọ bụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke bara uru n'ihi na ha na-edozi ihe gị ma na-eme njem na-ebughị ngwugwu n'onwe gị. Ị nwekwara ike iji ụgbọ oloko RER ahịrị B ijikọ na OrlyVAL, ya bụ, na-agbanwe na ọdụ Antony. Nke ụgbọ ala orly bụ nhọrọ ọzọ, na akpa gị na gị mgbe niile, n'agbanyeghị na ị ga-agbanwekwa na ọdụ RER/metro site na ọdụ Denfert-Rochereau.
N'ụzọ doro anya, a na-enwe tagzi mgbe niile ma ọ bụrụ na ị nweghị nsogbu na ego.
Ọdụ ụgbọ elu Beauvais
Ọ bụ obere ọdụ ụgbọ elu nke dị 90 kilomita n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke obodo Paris. Ọ bụ ebe ha na-arụ ọrụ ọnụ ala ụgbọ elu dị ka Blue Air, Ryanair ma ọ bụ Wizzair. A na-akpọ ya aha obodo dị nso, n'ihi ya, a pụrụ ịmata ya, n'ihi ya, ị ga-ekwu na ọ dị n'ime obodo Tillé, dị nnọọ ná mpụga obodo Beauvais.
A makwaara ya dị ka Beauvais - Tillé Airport ma ọ bụ Paris - Beauvais - Tillé ma ọ bụ ozugbo Old Beavais. Koodu IATA ya bụ BVA na dịka anyị kwuru n'elu ọ bụ nke ụgbọ elu dị ọnụ ala na-eji.
Enwere ụgbọ ala na-ejikọ ọdụ ụgbọ elu na obodo Paris Ma ee, ebe ọ bụ obere ebe, eziokwu bụ na ọ dị oke mfe ịkwagharị gburugburu ya, na-anakọta akpa, na-aga site na nchekwa na omenala na ọ bụghị ọtụtụ ihe ọzọ. A na-azụta tiketi maka ụgbọ ala na kiosk ma ọ bụ na igwe akpaaka (nke na-anabata naanị kaadị kredit). Gbakọọ na ọnụ ahịa dị gburugburu 17 euro kwa okenye.
ụgbọ ala ndị a rụọ ọrụ anaghị akwụsị n'etiti ọdụ ụgbọ elu na Gare Routière Pershing, ogige ụgbọ ala dị na Porte Maillot, ugwu ọdịda anyanwụ nke isi obodo France. Gbakọọ awa na nkeji iri na ise nke njem, ọ bụghị karịa. Ụgbọ ala na-esi n'ebe dị n'agbata ọdụ 1 na 2 apụ, ọ ga-eji nkeji ole na ole gawa. N'otu oge na Paris ị nwere ike iburu metro, Port Maillot dị na Line 1, chere na etiti ma ọ bụ RER ahịrị C iji banye n'ahịrị ụgbọ oloko. Isi ihe abụọ a dị ezigbo nso na ibe ha.
N'ezie, bọs na-ahapụ gị ozugbo n'ihu Paris Congress Center site na ebe ị nwere ike ịga na metro ma ọ bụ ọdụ ụgbọ ala ma ọ bụ were tagzi. Ọ bụrụ, n'aka nke ọzọ, ịchọrọ iji ụgbọ oloko gaa n'etiti, ị ga-eburu n'uche na Ọdụ ụgbọ elu Beauvais enweghị ọdụ ụgbọ oloko. Nke kacha nso dị kilomita anọ site n'obodo ahụ n'onwe ya. Ee, ị nwere ike iburu tagzi n'etiti euro 4 na 12, mana ụgbọ ala dị ọnụ ala karịa.
Ụgbọ oloko ahụ na-ahapụ gị na Gare de Nord n'ime ihe dịka otu elekere. Ị nwere ike ịzụta tiketi na windo ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ na igwe akpaaka na-anabata mkpụrụ ego ma ọ bụ kaadị kredit mgbawa. Gbakọọ ihe dị ka euro 15.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ụlọ elu » ọdụ ụgbọ elu Paris